.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song လေးတွေ ဖန်တီးဖို့ SWI Effect များ
Flash Song လေးတွေ ဖန်တီးဖို့ SWI Effect များ
Flash Song လေးတွေ ဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော၊ ခုမှ Flash Song လုပ်တာ ဝါသနာပါလာလို့ လုပ်ချင်တဲ့
သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ရော Flash Song တွေ ဖန်တီးဖို့ SWI Effect လေးတွေ အသစ်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟိုအရင် ကျွန်တော် Google Code က တင်ပေးထားတာတွေက 2013 ကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒေါင်းလို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
Google က 2013 ကုန်တာနဲ့ Google Code ကို ဖျက်ပြီးတော့ Google Drive မှာပဲ Host လုပ်ဖို့ ပြောထားပြီး ပါပြီ။
ပြီးတော့ အရင်က တင်ပေးတုန်းက SWI Effect တွေကို WinRAR နဲ့ ချုပ်ပြီးတော့ တင်ပေးခဲ့တာပါ။ တစ်ချို့ကျတော့
WinRAR ဆော့ဝဲလ် မရှိလို့ ဖွင့်မရ သုံးမရ ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ WinRAR ဆော့ဝဲလ်ကို Full Version မဟုတ်သေးတာတွေ
သုံးနေတာတို့ ဆိုရင် ဖွင့်လိုက်တိုင်း ဝယ်ခိုင်းတဲ့ ဘောက်စ်က တက်နေတော့ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်
ဒီတစ်ခါတော့ SWI Effect တွေကို .swi ဖိုင်နဲ့ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Flash Song လုပ်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူ ယူ
သုံးနိုင်အောင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ အရင်ကထက်လည်း Effect တွေ စုံပါတယ်။ Double Tun တင်ပေးခဲ့တဲ့ Effect တွေရယ်
မလွမ်းဧကရီ ၊ ကိုမျိုးဦး ၊ မိုးကဗျာ ၊ ပြီးတော့ အနော်ဒေါင်းပြီး စုထားတာတွေရော ပါပါတယ်။ Flash Song လုပ်တဲ့အခါ
အများဆုံး လိုအပ်တဲ့ Play/Stop Button တွေ ၊ Mouse Effect တွေ ၊ လင့်တွေ ချိတ်ဖို့ Button တွေရော အများကြီးပါ။
Download: Flash Song လေးတွေ ဖန်တီးဖို့ SWI Effect များ
အောက်က မိုးကဗျာ ပေးထားတဲ့ Effect နှစ်ခုကိုတော့ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ လိုချင်ရင် ဒေါင်းယူလိုက်ပေါ့နော်..။
Posted by Thurainlin at 09:35
Labels: Effect, Flash, Flash Song